သူမ ဘဝထဲကနေ ထာဝရခွဲခွာသွားတဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းအတွက် နေ့စဉ်မပြတ် အလှူအတန်းတွေလုပ်ရင်း အမျှပေးဝေနေတဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန် – Cele Lover
သူမ ဘဝထဲကနေ ထာဝရခွဲခွာသွားတဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းအတွက် နေ့စဉ်မပြတ် အလှူအတန်းတွေလုပ်ရင်း အမျှပေးဝေနေတဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ရွှေရည်သိန်းတန်ရဲ့ ခင်ပွန်းကတော့ ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရည်သိန်းတန်ကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို တစ်နေ့မှ မေ့မရဘဲ အောက်မေ့သတိရနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပို့စ်တစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ သူမရဲ့ဘေးကနေ ထာဝရခွဲခွာသွားတဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းအတွက် နေ့စဉ်မပြတ် အလှူအတန်းတွေလုပ်ရင်းအမျှပေးဝေနေကြောင်း ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” ယနေ့.ဓါတ်ကြီးလေးပါးဆွမ်းကုသိုလ်ပါဘုရား..
တို့၏ကိုယ်စား​သော်လည်း​ကောင်း. .. ပဌာန်းကျမ်းတော်မြတ်၅ကျမ်းအားရွတ်ပွါးပူဇော်၍လည်းကောင်း..သံ​ဗု​ဒ္ဓေ၉၀၀၀၀.. သရဏဂံု ၉၀၀၀၀.ရက် ၉၀ အဓိဌာန်ဖြင့်၎င်း.မဟာ​ဝေဒဗ္ဗရတနာမဏ္ဏာန်နှင့် ပထဝီဇယမဏ္ဏာန်​တော်မြတ်ကို ရက်၉၀အဓိဌာန်ဖြင့်၎င်း.
မေတ္တာသုတ်ပရိတ်တော်မြတ်ကိုနေ့စဉ်..၁၀၈ ကြိမ် တိတိရွတ်ပွါးပူဇော်ပါ၏..
ဘုရားဒကာကြီးကိုနေလသည်လည်း.ထပ်တူရ၍ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သော.ဘဝမှာ အပြည့်စုံဆုံးအေးချမ်းပါစေဘုရား..🙏🙏🙏” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article အစားထိုးလို့ မရလောက်အောင် သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ စကားလုံးများဖြင့် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
Next Article တောထဲမှာ နေရတာအဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပုံလေးတစ်ပုံဖြင့် သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဟန်လင်း